Liverpool, Man City, Chelsea & Leicester - SADDEXDII Dhacdo Ee Lama Filaanka Ahaa Ee Laga Diiwaangeliyey Boosaska Sare Ee Horyaalka Premier League - Gool24.Net
Liverpool, Man City, Chelsea & Leicester – SADDEXDII Dhacdo Ee Lama Filaanka Ahaa Ee Laga Diiwaangeliyey Boosaska Sare Ee Horyaalka Premier League
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayay ka dhaceen saddex arrimood oo waaweyn oo haddana beddeli kari waayay miis kala sarraynta horyaalka.
Chelsea ayaa Sabtidii ku qanacday inay kaalinta shanaad u tegayso markii ay guul-darro xanuun badan oo 3-0 ah kala kulmeen Sheffield United, laakiin Leicester City oo ka sare mari lahayd, kaalinta saddexaadna tegi lahayd ayaa iyaduna jab lama filaan ah oo waliba bahdil ahi kasoo gaadhay ciyaartii ay martida u noqdeen Bournemouth oo ku karbaashtay 4-1.
Manchester United V Southampton Fc
Taageereyaasha Manchester United ayaa Axaddii ku seexday inuu u bannaanaaday booskii ay muddada dheer raadinayeen ee kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League, waxaanay garoonka Old Trafford ku qaabileen Southampton, laakiin dhamaadkii ayaa lagu qabtay barbar-dhac 2-2 ah.
Saddexda kooxood ee kaalmaha saddexaad, afraad iyo shanaad ku kala jira ee uu dagaalka ugu weyni ku dhexmarayo horyaalka ayaa dhamaantood iska lumiyey fursado qaali ah oo ay mid walba midda kale kaga sare mari lahayd, waxaana ducaysatay Chelsea oo booskeedii hore nasiib ugu badbaaday oo kaalinteeda saddexaad haysata, halka Leicester ay afraad ku jirto oo ay farqiga dhibcaha kaga horreyso Manchester United.
Horyaalka Premier League oo ay ka hadhsan yihiin saddex ciyaarood, waxay Red Devils, Blues iyo Foxes ay halgan u gelayaan inay mid walba badiso dhamaan kulamadeeda iyadoo mid walba ay halis gelayso haddii ay dhibco lumiso.
Manchester United ayaa xaaladda ugu xun ku jirta hadda, waxaanay ka maqan tahay afarta kaalmood ee ugu sarreeya, mana jirto hadda natiijo gacantooda ugu jirta laakiin waa inay sugaan in labada kooxood ee Chelsea iyo Leicester City ay dhibco iska lumiyaan si ay uga faa’iidaysan karto.
Haddii horyaalku sidan ku dhamaado, Manchester United waxay haysataa kaadh labaad oo ay ciyaarayso oo ah inay ku guuleysato tartanka Europa League oo ay lug kula sii jiraan wareegga siddeeda, waxaana haddii ay koobka ku guuleystaan ay si toos ah uga qayb-geli doonaan tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe.